China UL Emergency LED Exit Lighting Combo Manufacture and Factory | Saselux
Ike oriri: 3.5W max.
Mmepụta: 4W max.
3.6V Nickel Cadmium Batrị
① [US Standard] Mgba ọkụ ọkụ ihe nrịba ama mberede enwetara asambodo UL. E ji ụlọ thermoplastic kpụọ akpụ. UL-94V-0 ọkwa ire ọkụ, na-eguzogide ọkụ. 120V-277V AC ọrụ voltaji zuru ụwa ọnụ. Ihe ngosi ọpụpụ azụmahịa a dị mma maka itinye n'ọnụ ụzọ, agwaetiti, ụlọ nri, ụlọ ọfịs na ụlọ nkwakọba ihe. A nwalewo ihe ngbanwe ule na ngosi ụgwọ.
② [Ọ dị mfe ịwụnye] ọkụ mgbaama ọpụpụ mberede nwere ike ịbụ elu ụlọ ma ọ bụ mgbidi etinyere. Ngwa niile ga -akwadoro gị. A na -eji ya na iru mmiri, mana ọ bụghị mmiri mmiri, na ọnọdụ akọrọ; Ọnọdụ okpomọkụ bụ 0-40 Celsius. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eji ya, pls kpọtụrụ anyị.
③ [Ọpụpụ Ọkachamara Ọkachamara ọkụ] E wuru ihe mgbapụta ọpụpụ ihe mberede ọkụ na batrị batrị 3.6V Nickel cadmium maka opekata mpe nkeji iri iteghete maka oge ịgbaju oge zuru ezu, 0 ℃ -40 ℃ ọnọdụ iru mmiri dị n'ime ụlọ edepụtara. Ọ chọrọ awa 24 iji chajịa.
[50000 Hours Lifetime] 50000 awa ndụ na oge 300 maka ụgwọ cyclic, batrị ndabere nwere ike gbanye ugboro 300 ma rụọ ọrụ nkeji iri abụọ na asaa. Akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụkụ eletriki na ụlọ, akwụkwọ ikike afọ 3 maka batrị. Ngwa ọrụ ọkụ ọkụ mberede ọkachamara.
Application [Ngwa & Ọrụ] Enwere ike iji LED Emergency EXIT Sign Sign Combo na okirikiri 120V/277V, dị ka ebe obibi, ọkụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, zuru oke maka paseeji, paseeji, ụlọ ọgwụ, ụlọ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ. , ụlọ nri, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, wdg Anyị na -enye ọrụ OEM. Anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa maka gị.
Nke gara aga: US Standard Commercial LED LED Emergency Exit Sign Lighting
Osote: Abụọ na -agbanwe agbanwe isi isi ọpụpụ Ọpụpụ ngwakọta
Ikanam Commercial Emergency Wepụ Light ngwakọta
CSA Green Running Man Light Sign Exit Sign